हबकूक 1 ERV-NE - हबकूकद्वारा - Bible Gateway
हबकूकद्वारा परमेश्वरलाई उजूरी
1 यो यही वचन हो जुन हबकूक अगमवक्तालाई दिईएको थियो।
2 हे परमप्रभु, म निरन्तर तपाईंसँग सहायता मागी रहेकोछु। तपाईंले मेरो निम्ति कहिले सुन्नुहुन्छ? म यो उपद्रोको कारण तपाईंसँग पुकारा गरिरहेछु, तर तपाईंले यस बिषयमा केहि पनि गर्नु भएन?3मानिसहरूले सामानहरू लुट्छन् अनि अरू मानिसहरूलाई चोट पुर्याउँछन्। मानिसहरू लडाईं अनि झगडा़ गरिरहेकाछन्। किन तपाईंले मलाई यस्तो भयानक कुराहरू देखाउनु हुँदैछ।4व्यावस्थाका कानूनहरू ब्यार्थ भईसकेकोछ अनि मानिसहरूले न्याय गर्दैनन्। दुष्टहरूले धर्मीहरूलाई लडाईंमा जितिरहेछन्। यसकारण न्याय निष्पक्ष छैन। न्यायले जित्दैन।
हबकूकलाई परमेश्वरको उत्तर
5 परमप्रभुले उत्तर दिनुभयो, “अन्य जातिहरूलाई हेर, तिनीहरूलाई देखेर छक्कपर्नेछौ! म तिम्रो जीवन कालमा यस्तो गर्नेछु त्यसले तिमीलाई छक्क पर्नेछ। तिमीले यसलाई हेर्नु पर्छ अनि विश्वास गर्नुपर्छ। यदि तिमीलाई यस बिषयमा बताए ता पनि तिमीले विश्वास गर्ने छैनौ।6म बाबेलका मानिसहरूलाई शक्तिशाली बनाउँनेछु। तिनीहरू नीच अनि एकदमै शक्तिशाली लडाकुहरू छन्। तिनीहरू पृथ्वीका सबै ठाउँहरूमा छरिनेछन्। अनि अघि बढिरहनेछन्। तिनीहरूले त्यो घरहरू अनि शहरहरूमा दखल गर्नेछन् जुन तिनीहरूका होइनन्।7कल्दी मानिसहरूले अन्य जातिहरूलाई भयभित पार्नेछन्। कल्दी मानिसहरू आफू जे सोच्दछन् त्यही गर्नेछन्, अनि जहाँ जान ईच्छा लाग्छ त्यहीं जानेछन्। 8 तिनीहरूका घोडाहरू चितुवाहरू भन्दा पनि छिटो दौडने हुन्छन्। अनि सूर्य अस्ताएपछि निस्केका ब्वाँसाहरू भन्दा पनि डर लाग्दा हुन्छन्। उनीहरूका घोडसवार सैनिक सुदूर स्थानबाट आउँछन्। तिनीहरूले तिनीहरूको शत्रुहरूमाथि यस्तो आक्रमण गर्छन् जस्तो कि आकाशबाट चील शिकारमाथि हानिन्छ।9तिनीहरू सबै लडाईं गर्न उत्सुक छन्। तिनीहरूका सैन्य मरुभूमिको हुरी जस्तै छिटो अघि बढ्छन्। बाबेलका सेनाहरूले धेरै कैदीहरूलाई, जो बालुवाको कण जस्तै गनी नसकने संख्यामा टाढा लैजाने छन्।
10 “तिनीहरूका सैनिकहरूले अन्य देशका राजाहरूको हाँसो उडाउँनेछन्। अन्य देशका राजाहरू उनीहरूका निम्ति तमाशा बन्नेछन्। तिनीहरूको सैनिकहरू अग्लो किल्ला भएको शहरमा गएर हाँस्नेछन् किनकि ती सैनिकहरूले माटोको दल-दल परेको बाटो बनाएर तिनीहरूलाई सजिलै हराउँनेछन्। 11 फेरि उनिहरू अर्को स्थानमा युद्धका निम्ति पहिलो स्थान छोडेर आउँनेछन् जसरी आँधी आउँछ अनि अगाडी बढेर जान्छ, कल्दी मानिसहरू आफ्नो शक्तिको पूजा गर्छन्।”
परमेश्वरलाई हबकूकको दोस्रो उजूर
12 हबकूकले फेरि भने, “हे परमप्रभु तपाईं,
अनन्त सम्म जीवित हुनुहुन्छ,
परमप्रभु तपाईं मेरो परम-पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ,
जो कहिल्यै मर्नु हुँदैन।
हे परमप्रभु! तपाईंले बाबेलका मानिसहरूलाई
न्याय गराउन सृष्टी गर्नुभयो।
हे हाम्रो चट्टान! तपाईले अरू राष्ट्रहरूलाई सजाय दिन,
तिनीहरूलाई नियुक्त गर्नुभयो।
13 तपाईंका आँखाले दुष्ट कुरा हेर्न सक्तैनन्।
तपाईंले ती मानिसहरूले पाप गरिरहेको हेर्न सक्नु हुन्न।
यसकारण तपाईले ती पापीहरूको बिजय कसरी हेर्नु हुन्छ?
दुष्टले धर्मी मानिसलाई जितेको देख्दा,
तपाईं किन प्रतिक्रिया गर्नुहुन्न?
14 “तपाईंले मानिसहरूलाई समुद्रको
अनगन्ती माछाहरू जस्तै बनाउनु भयो,
तिनीहरू समुद्रको जीव-जन्तु जस्तै छन्,
जसको कुनै शासक छैन।
15 शत्रुहरूले तिनीहरूलाई बल्छी,
अनि जाल लगाएर पक्रिन्छन्।
तिनीहरूले तिनीहरूलाई जालमा पक्रिन्छन्,
अनि शत्रु त्यसरी पक्रिएकोमा एकदमै खुशी हुन्छन्।
16 बल्छी अनि जालले माछा मार्छ,
त्यसको कमाईले उसलाई मिठो खान,
र धनी हुन सहायता गर्छ।
यसकारण ती शत्रुहरूले जालको पूजा गर्छन्।
तिनीहरूले जालका निम्ति बलिदान चढाउँछन्
अनि ती चिजहरूको सम्मानमा धूप जलाउँछन्।
17 के यसरी तिनीहरू आफ्ना जालहरूले धन कमाई रहेछन्?
के तिनीहरू लगातार कुनै दया नदेखाई,
मानिसहरूलाई नष्ट पारिरहने छन्?